Abavelisi be-HDI ye-HDI | KwiChina i-HDI PCB Factory kunye nabaxhasi
I-8 yePCI yePCI yokhuseleko
Le yibhodi yesekethe engama-8 yeshishini lokhuseleko. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.
Kukho iintlobo ezi-6 ezahlukeneyo zeebhodi ze-HDI, ngokusebenzisa i-vias ukusuka kumphezulu ukuya kumphezulu, kunye ne-vias ezingcwatyelweyo kunye ne-vias, ezimbini okanye nangaphezulu ze-HDI umaleko nge-vias, isiseko esenziwe ngaphandle konxibelelwano lombane, ulwakhiwo olungenasiseko usebenzisa izibini ezibini kunye nolunye ulwakhiwo lwezinto ezingenasiseko usebenzisa izaleko ezibini.
10 maleko HIGH TYINIKI INTERCONNECT PCB
Le yibhodi yesekethe yeshumi yomzi-mveliso weTelecom. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.
I-12 ye-HDI yePCI yekhompyuter yelifu
Le bhodi yesekethe ye-12 yemveliso yemveliso yekhompyutha. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.
I-22 yePCI yePCI yomkhosi kunye nokhuselo
Le bhodi yesekethe engama-22 yoshishino lokhuseleko. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.
Ibhodi yesekethe ye-HDI yenkqubo emiselweyo
Le bhodi yesekethe ye-10 yenkqubo yeshedyuli. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.
I-HDI ye-HD enamacala avalwe ngeSemiconductor
Le yibhodi yesekethe ye-4 yovavanyo lwe-IC. Iibhodi ze-HDI, enye yeetekhnoloji ezikhula ngokukhawuleza kwii-PCBs, ngoku ziyafumaneka ePandawill. Iibhodi ze-HDI ziqulethe ii-vias ezingaboniyo kunye / okanye ezingcwatyelwe kwaye zihlala ziqulathe ii-microvias ze .006 okanye ngaphantsi ububanzi. Banokuxinana okuphezulu kwesekethe kuneebhodi zesekethe zemveli.